Jaamacadda Muqdisho oo deeq gaarsiisay gobolka Shabeelaha Dhexe. |
Deeqdan oo isugu jirtay bariis, sonkor, caano, timir, baco, saliid, iyo caagadaha biyaha ayaa waxaa ka faa’idaystay in kabadan laba boqol oo qoys oo kamid ahaa dadkii ay saamaysay abaaraha iyo biyo la’aanta ee tuulooyin hoos taga degmada Balcad.
Deeqdan oo ahayd kaalmo ay iska aruuriyeen bahda Jaamacadda Muqdisho sida ardayda, macalimiinta, maamulka iyo shaqaalaha guud ee Jaamacadda Muqdisho ayaa waxay ugu talagaleen inay ku caawiyaan walaalahooda ay saamayntu kuyeelay abaaraha iyo biyo la’aanta soo food saartay.
ugu horayn waxaa halkaas ka hadlay guddoomiye ku xigeenka guddiga gurmadka degdega abaaraha ee Jaamacadda Muqdisho ustaad Aadam Axmed Xuseen (xerow) oo halkaa kasheegay in deeqdan ay noqon doonin tii uhoraysay ee aan gobolkan soo gaarsiino iyo tii ugu dambaysayba.
“baahida kajirta gobolkan iyo deeqdan aan sidno isuma dhigmaan laakiin qalbigayaga ayaa balaaran jaamacada muqdishona waxay markastaba kudadaali doontaa wixii karaankeeda ay walaalahooda ku caawin karaan” ayuu yiri Aadam Axmed Xuseen (xerow).
“Jaamacadda muqdisho waxay daraasad ku wadaa waxyaabaha sababa abaaraha iyo biyo la’aantan soo noqnoqday dhawaanna waxaan lawadaagi doonaa shacbiga Soomaaliyeed” ayuu sii raaciyay guddoomiye kuxigeenka guddiga gurmadka degdega abaaraha ee Jaamacada muqdisho.
sidoo kale waxaa isna halkaas kahadlay guddoomiyaha gobolka shabeelaha dhexe mudane Axmed Mayre Makaraan oo umahad celiyay garashada iyo dadaalka ay muujisay Jaamacadda muqdisho.
” sida musa’uuliyiinta Jaamacada ay horey usheegeen cidaan waxyar wadaagin wax wayn mawadaagi karaan, aad baan raali ugu nahay deeqdan tayada leh ee ay gobolka soo gaarsiiyeen waxaan rajaynayaa bahada waxbarashada inay ku daysan doonaan Jaamacadda muqdisho oo sida idin muuqata deeq kudayasho mudan soo gaarsiisay gobolka shabeelaha dhexe” ayuu yiri goddoomiye Axmed Mayre Makaraan.
Deeqdan ayaa waxay daba joogta hadalkii uu yiri ama uu ku baaqay guddoomiya jaamacadda Muqdisho Dr. Ibraahiim Maxamed Mursal Cali ee ahaa ” in dhamaan bahda Jaamacadda Muqdisho ay isu taagaan sidii ay uga qeyb qaadan lahaayeen gurmadka deg deg ah una gaarsiin lahaayeen dadka Soomaaliyeed ee abaartu kudhufatay gargaar”.
Deeqbixintan ayaa waxay kusoo idlaatay jawi qurux badan.